बीओकेको संस्थापक शेयर मङ्सिर २२ देखि लिलामीमा | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर बीओकेको संस्थापक शेयर मङ्सिर २२ देखि लिलामीमा
बीओकेको संस्थापक शेयर मङ्सिर २२ देखि लिलामीमा
मङ्सिर ११, काठमाडौं (अस) । बैङ्क अफ काठमाडौंले संस्थापक तर्फको ६१ लाख ५८ हजार ६७ कित्ता शेयर मङ्सिर २२ देखि २९ गतेसम्म लिलामीमा ल्याउने भएको छ । बैङ्कले संस्थापक तर्फको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत कायम गर्न लिलामीमार्फत शेयर विक्री गर्न लागेको हो । हाल बैङ्कको संस्थापकतर्फ ४५ दशमलव ६४ र सर्वसाधारणतर्फ ५४ दशमलव ३६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ ।
यस बैङ्कले पहिलोपटक प्रतिशेयर अंकित मूल्य रू. १ सयमा २ सय १० प्रिमियम थपेर प्रतिशेयर ३ सय १० का दरमा ६१ लाख ५८ हजार ६७ कित्ता एफपीओ जारी गर्न २०७३ वैशाख २६ गते सेवोनमा निवेदन दिएको थियो । सो समयमा संस्थापकतर्फको थप साधारण शेयर विक्री गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिकामा कुनै व्यवस्था नभएकाले स्वीकृति दिन नसक्ने भन्दै अन्य कुनै विकल्प रोज्न बोर्डले निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बैङ्कले फेस भ्यालु रू. १ सयमा प्रिमियम वापत रू. १ सय ६६ थप गरी रू. २ सय ६६ मा लीलाम बढाबढ गर्न अनुमति मागेको थियो । उक्त प्रस्ताव पनि अस्वीकार गर्दै बोर्डले विनाप्रिमियम लीलाम बढाबढमा विक्री गर्न कात्तिक २१ गते स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
यस आधारमा बीओकेको संस्थापक शेयरमा न्यूनतम रू. १०० लाई आधार मानी सो वा सोभन्दा बढी न्यूनतम १०० कित्ता र अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि राष्ट्र बैङ्कले तोकेको प्रतिव्यक्ति सिमाको अधिनमा रहने गरी आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदन बुझाउनका लागि बैङ्क अफ काठमाडौं
लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय तथा उपत्यका भित्रका कमलपोखरी, नक्साल, अनामनगर, न्यूरोड, भक्तपुर, जावलाखेल, महाराजगञ्ज, चावहिल, नयाँ वानेश्वर, त्रिपुरेश्वर तथा उपत्यका वाहिर बिराटनगर, जनकपुर, बिरगञ्ज, हेटौडा, नारायणगढ, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, बिर्तामोड, धरान, बाग्लुङ र सुर्खेतलाई तोकिएको छ । साथै, विक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्किङबाट पनि आवेदन बुझाउन सकिनेछ ।
यस बैङ्कको चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्म रू. ५ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख ७६ हजार चुक्तापूँजी रहेको छ । सो अवधिमा बैङ्कले रू. २२ करोड ४० लाख ४६ हजार नाफा आर्जन गरेको छ । संस्थापक तर्फको शेयर लिलाम विक्री पश्चात बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. ६ अर्ब २४ करोड ५३ लाख ८२ हजार पुग्नेछ । चालू आवभित्र रू. ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउने बैङ्कको प्रक्षेपण रहेको छ ।